Yakakosha Basic Kit yeiyo Yakanaka Linux Installer | Linux Vakapindwa muropa
edumix | | General, Resources
Aaahh, linux kugutsikana kwako kuri kuswedera. Zvinoshamisa.
Ini ndaida kugovana izvi newe:
Shamwari: - Ndinovhura pc yako, ndinogona here?
N @ ty: - Ehe, hapana mutambo ... iwe uchaona kuputika kweSUSE, asi usazvipe, inotanga Windows nekukasira ...
Shamwari: - Une Linux !!!
N @ ty: - Ehe, ini ndakavhuraSUSE.
Shamwari: - Kwakanaka sei! Ini ndinokukoka iwe kumba kwangu uye undigadzirire ini?
N @ ty: - Hongu: D
Shamwari: - Ko kana ndichida kushandisa Messenger?
N @ ty: - Iwe unoshandisa imwe yakafanana inoshanda zvirinani ...
Shamwari: - Uye Delphi?
N @ ty: - Eeehh… tichafanira kuisa zvimwe zvinhu, asi hongu…
Shamwari: - Ah ...
N @ ty: - Usanetseke, uchaenda kunoona desktop cube uye uchaida.
Zvinoreva pandinowana GRUB yangu kushanda (Ndichiri ndisina nguva kugara pasi uye kwazvo tsvakurudza mhinduro kuti zvaipirwa saka nomutsa neni Ini ndoda pc yangu kuti inyatso shanda kusvika China) uye inogona kuratidza kuratidzwa kwekushanda kwakakwana kwepc yakavhurwaSUSE 11.0, pamwe inguva yangu yekutanga se Yepamutemo Yekuisa yeLinux Mune Situ.
Izvi zvakanditungamira kunetseka pamusoro pezvinhu zvinoverengeka:
* Ini handigone kuodza moyo shamwari yangu mukumisikidza. Chekutanga pane zvese, nekuti ishamwari yangu. Chechipiri, kuzvidzora kwangu kunononoka kunotambura zvakanyanya. Chechitatu, nekuti inogona kuita kuti pc isashande uye, zvakatoipisisa, kubvisa munhu anofarira software yemahara uyo, akatarisana neyakaipa chiitiko, angangodaro asingade kuisa Linux zvakare mune ramangwana.
* Iye waunodzidza naye, ane vanhu vazhinji vanozoziva nezve kusakwanisa kwangu kwegadziriro yekumisikidza masisitimu anoshanda
* Ini ndinodzokorora: iye waunodzidza naye uye ane mikana yakawanda yekundirova :)
Kufunga nezve izvi uye kuti ini handizove mumadomaini angu, zvakaitika kwandiri kuti ndigadzire ronga nezvakakosha iyo yatinofanira kufunga nezvayo kana tichiita kumisikidzwa kweLinux pane pc iyo inotova neWindows inoshanda sisitimu inoshanda (uye izvo hazvingaregi kuzviita).
Iyo yekutanga michina iyo iyo Linux installer inofanirwa kugara iinayo paruoko, mumaonero angu, ndeiyi:
* LiveCD, DVD kana inoenderana kugovera kuisirwa kana bvunzo nzira. Sei Ndakataura kakawanda, migove yatinozoisa inofanira kunge iri (zvirinani) kuyedzwa kamwe, kuti tione kana isu tichizvizivisa pachedu neiyo interface, iyo desktop, kana zvirinani tinogadzira zano rekutanga renzvimbo yezvishoma zvinoshanda zvinotibvumidza kugadzirisa dambudziko.
Iyi nzira yekutanga ndeye, mumaonero angu, basa remushandisi uyo anoda kuve neLinux pane pc yake.
* Cheatsheet iine basic console mirairo (yakakosha!)
* Backup izvo zvemafaira edu akakosha muWindows. Kudzivirirwa kwemushandisi uye yakasarudzika mugadziri.
* Windows yekuisa disc (haungazive…)
* Hiren bhuti CD (Pasina izvi handibve pamba). Ichi chii?
El Hiren bhuti CD CD inotakurika (kushanda kwakafanana kune liveCD's yedistros) iyo ine zvese zvinodiwa zvinoshandiswa kubhoot system mushure mekukanganisa kwakakomba. Iine huwandu hukuru hwekushandisa kwegadziriro yekugadzirisa: system diagnostics uye kuongorora, antivirus, partition manejimendi, dhata rekudzorera maturusi, nezvimwe.
Kana dambudziko rikamuka, zvinokwanisika kubha kubva ku cd (kunyangwe zvimwe zvese zvisingashande). Menyu inoratidzwa ine sarudzo dzakawanda idzo, kunyangwe dzichiratidzika sedzakanyanya, dziri paCD nekuti zvine mashandiro chaiwo anogona kutiburitsa mumatambudziko nekukurumidza.
Hazvina maturo kutaura, CD iri rine software yemahara uye yakafanana neyemuridzi, nekudaro kugoverwa kwayo uye kushandiswa kwayo kunoonekwa sekunge kusiri pamutemo. Zvichava zvedu kusarudza kuishandisa (yangu yakachengetwa mukona iri kure kwazvo yevatyairi vangu, zvimwe kana ndikaida rimwe zuva ...)
* Hushoma huwandu hwezivo nezve matambudziko anogona kumuka mukumisikidzwa. Kuziva hakutore nzvimbo, uye kuverengera zvishoma zvishoma nezve chii chakaipisisa chingaitika kwatiri Tinofanira kuzvitenderedza kana mamiriro asingafadzi akamuka.
Apa ndipo pakauya runyorwa rwangu, ndiudze kana iwe uchifunga kuti ndiri kukanganwa chimwe chinhu :).
Kwaziso kwakawanda uye kusvika nguva inotevera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Yakakosha Kit yeGakanaka Linux Installer
Ini ndaizowedzera zvinhu zvakati wandei, nekuti iyo PC iyo yaunoda kuisa Linux inotova neWindows kuisirwa, kutanga iyo perfectdisk, inova ine simba kwazvo defragmenter iyo inoraira mafaera ese pakutanga kwe diski (mushure mekumhanyisa iyo 3 times more or less) saka kana iwe ukakamura diski iwe hauna matambudziko ekurasikirwa kwedata kubva paWindows uye zvakare iyo gparted kune yekupedzisira partition, kwaziso
Izvi zvinhu zvinondityisa ...
Mangwanani akanaka, kutanga kutumira kwandakuisa.
Kukuudza, kuti kune aya makesi Wubi yakanaka kwazvo, kuva nehunhu usina kuisa.
Uye zvakare, kana ichikanganisa idle usb flash drive, iwe unogona kuiisa pane iyo flash drive (iyo yandakaita ne opensuse uye fedora).
Iye zvino ndiri kuda kuziva, chii chauri kudzidza? Ndiri kuda kuziva.
Se quid procuo, ini ndichati ini ndinodzidza huinjiniya hwemakomputa masystem.
PS Izvozvi zvandinoona kuti kuzivikanwa kweiyo inoshanda sisitimu hakundikane, ndiri kuda kuziva kuti vanhu vese vanotaura pane ino peji vanozviita kubva kuWindows.
aaa .... kuti naty anomutsa zvishuwo.
Diedura, unogamuchirwa kublog. Kunyangwe isu takatokurukura nezvazvo pane dzimwe nguva, chokwadi chekushandisa Win kune vazhinji ndechezvikonzero zvebasa. Haisi nyaya yangu ... ndinoishandisa nekuti ndinoda ,: D
Zvakakwana maererano naCarlitos, chinhu chekutanga kudzikisira dhisiki uye kurongedza marara (mafaera) mukona, mushure meizvozvo panouya danho rinotyiwa nevazhinji iro rinotanga mune ino yekuiswa kweanoverengeka masisitimu anoshanda "Iyo Kugovana". Ndingakurudzira kutanga kuita chirevo kubva windows nehurongwa hwaunofarira uye kusiya izvo zvaunoshandisa nelinux senzvimbo isina kupatsanurwa, nenzira iyi iyo yekuisa diski inozviziva uye zvidimbu pamadiro pasina kubata chero windows, apa hapana mukana wekurasikirwa nedata kana kukanganisa kupatsanura.
Chimwe chinhu chandingakurudzira ndechekutsvaga kana iwe uchida imwe mutyairi uye woitora usati waisa linux kuitira kana paine dambudziko rekubatana kana iwe usina internet, saka wakaita samambokadzi, kana distro yako isingaunze chimwe chinhu ipapo unacho paruoko.
Ini ndakanga ndisati ndambozviita ndisati ndazvidza diski, asi zvingave zvakanaka kudzikisa njodzi. Auqneu chokwadi, ndinofunga aya mashoma kwazvo, parizvino kuiswa kwe linux kuri nyore uye kwakachengeteka. Zvinogona kunge zvichinetsa kana ako mafaera ari akafanana windows partition uye iwe unofanirwa kugadzira partitions, saizi, kucheka uye kunama, uye shandura zvakare. Nhanho iyoyo inofinha, asi kana ikaitwa zvakadzikama, hapana dambudziko.
Kwazisai N @ TY, Ini nguva pfupi yadarika ndaverenga rako bhurogu uye ndakariwana richinakidza, ndobva ndarishanyirazve uye ini ndototaura pane chimwe chinhu;)
hapana sarudzo yemahara yeiyo Yakakwana Dhisiki?
Juan C mukuru wese. Ndiwo mweya, hongu changamire.
Chinhu nezve esty ndechekuti iri imwe nyaya: P
Zvino zvakanyanyisa, chokwadi ndechekuti ini ndiina Diedura, wubi akakwana kumushandisi weWindows waunoziva kuti achatya nekukurumidza paanenge ari padhuze pane linux desktop.
Uye kana zvisiri ... yekununura knoppix, ingangoitika, pinda windows kuti uzvidzivirire uye ugadzire iyo partition (inoderedza njodzi) uye wozoisa openuse yakananga pachikamu icho.
Ndine hanya nazvo, asi mumwe wandinoshanda naye anouya kuzoisa linux nezvose zvaunotaura, uye ndinotya xD
Ini ndadya zvinhu zvakati wandei, ndatenda nekupindura vakomana: D
Zvakaipa Ranae, wakagadzirisa sei?
"Ndiudze kana uchifunga kuti ndiri kukanganwa chimwe chinhu"
Ehe, kubva pamutemo waMurphy ...
Sezvavareva pamusoro apa, Live-USB kana wubi ipfungwa iri nani kune mumwe munhu mutsva kuLinux.
Neyambiro yakawanda ivo havasi kuvatyisidzira? Nekungwarira kwakawanda, ndinotarisira kuti N @ ty mudiwa haazive LXA! zvakadaro.
Kune mumwe munhu ari kutanga kushandisa linux zvakanakisa kuti usamuvhundutse uye kuomesa newubis kana livecds kana liveusb kana chero chii. Chinhu chakanakisa ndechekumupa zvinyorwa zvekutanga nezve zvakanakira linux vs windows, umupe mazita emaapplication anotsiva zvekare ewindows uye kumuyeuchidza kuti google ishamwari yake… akagadzirira…. linux ichiri nyore kushandisa.
Esty, zvakadii neiyo UltraDefrag? yakavhurika sosi.
Aha, chimwe chinhu chakafanana chakaitika kwandiri, chete yanga isingave neshamwari yakandirova asi neni: S Mazuva mashoma apfuura ndakataura pane ino foramu kuti ini ndanga ndichiedza Knoppix uye ndakaifarira, saka ndakave nerakanakisa zano rekurodha pasi Wubi kuisa Ubuntu uye kuzviponesa iwo partitions ... chii chakaitika? Ini handina kukwanisa kupinda muUbuntu, handikwanise kupinda muWindows, uye pandakakwanisa kupinda ini ndakanga ndisisina madhiraivha eethernet, ndinoreva ndisina Ubuntu, ndisina Windows, ndisina itnernet kuti ndione kuti ungazvigadzirisa sei ... Buaaa = (k zvinosuwisa nguva
Zvakanaka ndinoti mune yangu yekutaura pamusoro, «... tsvaga kana iwe uchida mumwe mutyairi ...», kuti tirege kunamatira neiyo isina pc pc.
Zvese izvi zvishandiso zvinogona kunge zvichinyanya kushanda kuisa, asi hapana chinhu chiri nani pane kudzidza kudzika nekuisa neruoko, kuti uzive kuti ndedzipi shanduko dzinoitwa pakombuta yedu, ngatiti iri Linux.
Iwe unofanirwa kutora nguva yekudzidza, kuitira kuti iwe ugone kushandisa chaiwo muchina uye kupwanya zvikamu kuva chikara, hapana chichaitika kumahwindo ako, rangarira kuti Linux inoshandisa kanokwana zvikamu zviviri.
esty, heino imwe, Smart Defrag ndeye freeware.
Ini ndakazvimisikidza kanokwana ka3 nekuti zvaisatarisika zvakanaka haha ​​uye sezvo ini pakupedzisira ndanga ndagadzirira, chokwadi ndechekuti, ndanga ndave kutotya kudzoreredza Ubuntu ... peeeeeeeeero ps kuda kwangu kwakanyanya kuona nei iyi OS iri huru kwazvo izvozvi ini ndinonyora kubva kuUbuntu XD
Nzira yakanakisa KANA MWE MUNHU AKADA KUTAMIRA KU LINUX ndeyekuita kuti varasikirwe nekutya uko kwavanoiswa nevamwe.
Uye hapana imwe nzira irinani kune vashandisi vanogona kuita ZVESE paLinux kuti vataure uye vhuye nazvo.
Zvasara mazwi chete!
Zvakanaka N @ ty, ndakatanga kutya nekuisa Linux kuvanhu. Asi mushure mekumisikidzwa kwemakumi maviri, iwe unoziva zvaunogona kuwana. Chinhu chakanakisa kumhanyisa iyo LiveCD uye woona kuti inotora vhidhiyo, kurira, chipset, nezvimwe.
Kubudirira uye mune izvo zvinogona kubatsira!
@ N @ ty Thanks nekuda kwekushandisa kukuru ndatova nazvo mune zvandinoda !!!!. Ndatenda.
Zvakanaka ave nemazuva masere kubvira pawanyora ichi chinyorwa, asi maonero angu anogona kubatsira,
Yekutanga ndinovenga suse, ini ndinoda iyo inosimudzira, nharaunda yayo, asi kumisikidzwa kwemapakeji chinhu chinondiita kuti ndipenge
Yechipiri pese pandinofunga nezve linux + newbie mhinduro ndeye = ubuntu kana fedora
kazhinji zviri ubuntu zvandinokurudzira kuisa
zvikonzero zviri nyore, linux + kuoma + google = ubuntu
yekutanga gumi mhedzisiro yeanenge chero kutsvagirana kune linux kune ubuntu kumwe kunhu muchinyorwa
uye inogona kugadzikana kana iwe watobva kuUbuntu, asi chakanakira ndechekuti mune imwe yeiyo gumi mhedzisiro pane yatove mhinduro kudambudziko
Mushure mokunge novice ari connoisseur, zviri nyore kuziva kuti zvese linux zvine 80% zvakafanana kana iwe uchiziva kutsvaga nemapazi
debian, redhat, gentoo (iyo gentoo wiki muSpanish izere neruzivo runobatsira)
Kunyangwe icho chiri nyore chinhu kuisa debian pamusoro penetiweki, inoratidzika kunge yakanaka kwazvo
Uye chii chakaitika kudelphi?
Nemaparera nemaapuro ...